Segway miniLITE sy miniPLUS, maodely vaovao ho an'ny fitaterana haingana sy azo antoka | Vaovao momba ny gadget
Segway miniLITE sy miniPLUS, maodely vaovao ho an'ny fitaterana haingana sy azo antoka
Azo antoka fa raha milaza ny teny Segway aminao izahay, dia tonga ao an-tsaina izany fitaterana kodiarana roa izay mamela anao hifindra malalaka manodidina ny tanàna izany. Na izany aza, ny orinasa dia manana maodely bebe kokoa amin'ny katalaoginy. Ary nandritra ny foara IFA tany Berlin dia nanolotra modely vaovao roa izy izay hanampy amin'ny tolotra farany amin'ity taona ity. Momba ny Segway miniLITE sy miniPLUS.
Marina fa volana vitsy lasa izay ny fitaterana lamaody dia scooter elektrika fantatra ihany koa amin'ny hoe hoverboards. Ity karazana kodiarana roa ity dia nitombo teo amin'ireo mpampiasa, na dia marina aza fa maro ny olana naterak'izy ireo, tsy ny resaka lozam-pifamoivoizana ihany fa ny tsy fahombiazan'ny fitaovana ihany koa.
Ilay Segway miniLITE sy miniPLUS vaovao dia mitady sehatra ho an'ny daholobe maniry fitaterana mora tantana. Ary mazava ho azy, azo antoka araka izay azo atao. Ireo modely roa ireo dia matanjaka ary noho ny kodiarana mampijaly azy ireo dia afaka miditra amin'ny tany mikitoantoana izy ireo. Toy izany koa, ary araka ny anarany, ny maodely Segway miniLITE dia mifantoka amin'ny fampiasana hatramin'ny fahazazany. Raha ny voalazan'ny orinasa dia natao ho an'ny ankizy 6 taona ity vokatra ity.
Noho ny batterie dia azonao atao ny mandehandeha lavitra indrindra 18 kilometatra. Mihevitra izahay fa ity tarehimarika ity dia tsy mihevitra ny karazana tany sy haitao. Raha ny hafainganana farany ambony izay afaka hahatratra 16 km / ora. Amin'ny lafiny iray, ny fitaterana azy dia tsy ho lafo loatra amintsika: manana lanjany 12,5 kilao.
Mandritra izany fotoana izany, raha miresaka Segway miniPLUS, ny taona nampiasana azy dia 12 taona. Somary lehibe kokoa ny habeny ary amin'ity tranga ity dia tsikaritra ihany koa ny tsy fitoviana amin'ny halaviran'ny dia lavitra: 35 kilometatra. Ary koa, ny hafainganana farany ambony azon'ny Segway miniPLUS dia 20 km / ora. Ary raha manontany tena ianao, ny lanjany dia 16,5 kg.
Ankehitriny, satria tsy manana tanana malalaka foana hitondra zavatra bebe kokoa amintsika isika, dia izao Segway miniPLUS dia mampiditra ny maody 'manaraha ahy'. Ary tsy maintsy fehezinao amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra fotsiny ianao. Amin'izao fotoana izao, samy tsy misy vidiny voamarina ireo maodely roa ireo. Fa raha tarihin'ny zavatra fantatsika momba ireo rahalahiny ao anaty katalaogy isika dia tokony ho eo izy ireo - farafaharatsiny - 600 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Segway miniLITE sy miniPLUS, maodely vaovao ho an'ny fitaterana haingana sy azo antoka
fahitana marani-tsaina EQ fortwo, izao no fahitan'i Daimler ny hoavin'ny fiara fitateram-bahoaka